एकांकी ०६ – युग उचाल्ने अक्षरकर्मीको दुःखद अवसान – मझेरी डट कम
बन्दी-२ -२६ वर्षे तेजिलो आकृति भएकी बहुलाहीजस्ती देखिने केटी । हाउभाउ पत्रकारकोजस्तो गर्ने गर्छिन् । मन परेको बेला बर्दिधारीहरू उनलाई संगीता भनेर बोलाउँछन् । अधिकांस समय उनलाई पागल्नी भनेर बोलाइन्छ ।
तेश्रो दृश्यमा बेलाबेलामा नेपथ्यबाट आवाज आउँछ ।
म रक्तवर्णको अश्वेत जाति गोराहरू राज गर्छन्
दास ठानेर ममाथि म दीन हीन मलिन र उदास सिम्ठारो धान
बर्दिधारी-१ – बहुलाही भएर पनि सद्देको जस्तो कुरा गर्छे । बोलाउँदै ए जवानहरू हो एक क्षण कुट्न बन्द गर । सेनसँग कुरा गरौँ । कुट्न बन्द गरिन्छ ए सेन भन त यो देशको माया कसलाई छ ?
बन्दी-१ – पीडाले छटपटाउँदै यो देशको माया सबै नेपालीहरूलाई छ ।
बन्दी-२ -हाँस्दै हिं… हिं…म पागल …म पागल…। फनक्क फर्केर के भनिस् पागल त तँ होस् तँ ।
इच्छुकको तिम्रा युद्ध र बन्दुकहरूका विरुद्ध शीर्षकको कवितांश भन्दछिन् ।
एक क्षण रोकिन्छिन् र ईश्वरचन्द्र ज्ञवालीको इच्छुक स्मृति ग्रन्थमा भएको लेखसँग मिल्दोजुल्दो एकाध अंश भन्न थाल्छिन् ।
यी सेन समकालीन प्रगतिवादी स्रष्टा हुन् । क्रान्तिका गायक र कवि हुन् । युगचेतनाको साचार कविताबाट गर्न चाहने विचार निष्ठा र आन्दोलनका कवि हुन् । वर्गचेतना वर्गप्रेम वर्गघृणा र वर्गमुक्तिको शाश्वत अभिव्यक्ति यिनका कविताको विशिष्टता हो । त्यसैले यिनका कविताहरूको मूल्य नैतिक सन्देश हो । यिनले समाजवादी यथार्थवादी नैतिक मूल्य र संवेदनालाई कवितामा अभिभूत गरेका छन् । त्यसैले बुझ पुलिस दाइहरू म फेरि भन्छु । कुरा बुझ र सेनजीलाई सम्मान गर सम्मान गर ।
बर्दिधारी-१ – यो पागल केटी के के बक्छे बक्छे । त्यसका कुरा सुन्नुहुन्न । यो सेन मान्नेवाला छैन । आफूलाई बडो जननायक ठान्छ । पिट्न थाल्छ । अब बचाउन तेरा जनता आऊन् त । अनि म बुझ्छु । बर्दिधारीहरू मुखामुख गर्छन् । बर्दिधारी-१ पिट्दापिट्दै थाक्छन् र अरुलाई पिट्न संकेत गर्छन् ।
ती आज सुनबुट्टे विपना कुद्दै छन्… ।
बन्दी-२ – पिट्न रोक्न खोज्दै बुझेनौ पुलिस दाइहरू कुरा बुझेनौ र सेनजीलाई सम्मान गर भनेको झन अपमान गर भनेको पो बुझेछौ तिमीहरूलाई पनि धिक्कार छ मलाई पनि धिक्कार छ । गर अब मोज गर । देशलाई लुछ्दै जाओ खाँदै जाओ । सेनको मुर्छित शरीर हेर्दै उनको ूहात लाग्यो शुन्यू शीर्षकको कविता भट्याउँछिन् ।
एक क्षण चुप रहन्छिन् । डा जगदिशचन्द्र भण्डारीको इच्छुक स्मृती ग्रन्थमा रहेको लेखमा आधारित एकाध अंश कोट्याउँदै यी इच्छुकका कविता जनयुद्ध वर्गसंघर्ष तथा उच्च लक्ष्यका बीच रहेको एकात्मकताको विशिष्ट अभिव्यक्ति हुन् । यिनका कविता आफ्ना समयका सशक्त लयात्मक दस्तावेज हुन् र तिनले पाठकलाई आफूतिर आकर्षित गर्दछन् । मुक्त जीवनको सतत् कामना र प्राप्तिका निम्ति गरिने महत्तम संघर्षसँग गाँसिई संघर्षकै बिशिष्ट रुप कि्रया र त्यसलाई बुझाउने शब्द र भाव संकेतका माध्यमबाट सर्वहारावर्गीय चेतना र तत्जन्य संघर्षलाई अभिव्यक्ति दिनु यिनका रचनाको ध्येय हो ।
त्यसैले यस्ता मान्छेलाई नमार नपिट । बन्दै नपिट ।
उनलाई पनि गलहत्याइन्छ । उनी पछारिन्छिन् । उठ्न खोज्छिन् सक्तिनन् । पर्दा विस्तारै खस्छ ।
पर्दा विस्तारै उघ्रन्छ । पुलिस क्लवको भीआइपी कोठा । बन्दी-२ नजिकै उभिएर यताउती हेर्छिन् । मानौं उनलाई त्यही काममा खटाइएको छ । कलम यताउती घुमाउँछिन् लेखे जस्तो पनि गर्छिन् । पागलपनका झल्काहरू दिन्छिन् । डोरीले पछाडि दुबै हात बाँधेर बन्दी-१लाई खडा गरिएको छ । उनी वरपर अरु सबजना बर्दिधारीहरूलाई हटाइएको छ । बन्दी-१ लाई चरम यातना दिइसकेको स्पष्ट झलक देखिन्छ किनकि उनका शरीर हातखुट्टा सुनिएर विरुप देखिन्छन् । बन्दी विना अडेस खडा भइरहने अवस्थामा छैनन् । घोर यातनाले उनको शरीर भित्रैबाट जलन हुन्छ । त्यही जलन मेट्न उनी पानी मागिरहेका छन् ।
बर्दिधारी-१ – रिसले आक्रामक हुँदै अझै जनताको भन्छस् बुझ यो राजाको देश हो । यो ठकुरीको देश हो । तसर्थ राजाको भन् राजाको बन्दीको शिरमा मुक्का हान्दै साला म पनि ठकुरी तँ पनि ठकुरी राजा ज्ञानेन्द्र पनि ठकुरी । ठकुरी भएर देश बनाउने ठकुरीहरूकै विरुद्धमा लाग्छस् तँ किन ठकुरीको वंशमा कलङ्क बन्छस् के तँलाई ठकुरी बन्नुमा कहिलेकाहीं गर्व हुन्न
यो राजधानी जहाँ ठूलाठूला साहुजीहरू छन्
बडेबडे लालाजीहरू छन् दिनरात गुप्त मन्त्रणामा व्यस्त
बन्दी-१ -सकसका साथ मुख खोल्छन् वादलसँग सम्पर्क छैन । माओवादी नेताहरू मुमाराम खनाल र कृष्णध्वज खड्का मार्फत् मेरो सम्पर्क हुन्थ्यो उहाँहरू समातिए पछि अब मेरो कसैसँग पनि सम्पर्क हुन्न ।
बर्दिधारी-२ -केही नम्र हुँदै एई सेन तँलाई समातेपछि ज्ञानेन्द्र सरकार पनि खुशी होइबक्सेको छ । अब तेरो ज्यान लिए पछि मौसूफ अझ खुशी होइबक्सनेछ । मेरो पनि प्रमोशन हुनेछ । भरसक पुरस्कार पनि पाइएला जस्तो छ । यो अनुपम मौका मेरो काँधमा आउनु कम गौरवको विषय हैन । लौ त सेन मर्न हिंड् ।
बन्दी-१ – उनका आँखा बन्द नै छन् । ओठ मात्र खोल्न सक्ने अवस्थामा छन् । म हिंड्न सक्तिन तानेर लानुस् । बर्दिधारी-३ नजिक आउँछ ।
बर्दिधारी-३ -छक्क पर्दै हैन यो कस्तो ज्याद्रो मान्छे हो मर्न हिंड् भन्दा पनि तान्नुस् पो भन्छ बा । त्यसपछि बन्दीलाई तानेर नै अन्यत्र सार्न खोजिन्छ । केही पर लगेपछि पुनः त्यहीं छाडिन्छ । केही बेरमा नै खाना खान दिइन्छ । उनी हात उठाउँन खोज्छन् हात उठ्दैनन् । दुबै हात भाँचिएका हुन्छन् । बन्दी-२ सहयोग गर्न खोज्छिन् तर बर्दिधारी-३ को रोकावट हुन्छ । थालको भात खुट्टाले सार्छन् । थाल घोप्टिन्छ । जमिनमा छरिएको भात मुख जोतेरै खान्छन् । दुई गाँस भात खाई नसक्दै उनी उल्टी गर्छन् । उनमा असह्य पीडा हुन्छ ।
बन्दी-२ – बन्दी-१ लाई कुटेको देखेर हातले छेक्छिन् । पानी पियाएको जस्तो गर्छिन् । इच्छुककॊ ूझुल्केघामका राता किरणहरू शीर्षककॊ कविता भन्दै
नरोऊ तिमी मुस्कुराउँदै उठ
नरोऊ तिमी जुर्मुराउँदै उठ
बर्दिधारी-३ – यसले लेखेको जेल सम्बन्धी कविता चाहिं मलाई पनि कण्ठै छ । सुनाऊँ त । ऊ इच्छुकको जेल शीर्षकको कविता भन्न थाल्छ ।
जहाँ मुक्त आकांक्षाहरू बन्देज हुन्छन्
जहाँ हार्दिक भावहरूमा ठेस लाग्छ ।
बन्दुकको पहरा होस् अथवा त्यो कानुनको घेरा होस्
के फरक पर् यो र मित्र भयभित परिवेशमा
बन्दी-२ -सुधा त्रिपाठीको इच्छुक स्मृति ग्रन्थमा लेखिएको लेखको अंशसँग मेल खाने कुरा गर्छिन् ।
अभिव्यक्तिको जोखिम मोल्ने कवि हुन् इच्छुक । भन्न मन लागेको कुरा कवितामा भन्दै नभन्ने गरी लेख्ने कवि मध्येमा पर्दैनन् यिनी । निरर्थक बाँच्नु भन्दा सार्थक मर्नु उचित सम्झन्छन् यिनी । यिनी मृत्युलाई पहिले स्वीकारेर क्रान्तिमा होमिएका हुन् । त्यसैले यिनले आफ्नो अभिव्यक्तिको जोखिम पनि उठाएका छन् । आखिरमा तिमीहरू पनि तड्पिई तड्पिई मर्छौ । यिनलाई मारेर तिमीहरू इतिहासमा ठूलो भुल गर्दै छौ । कहिल्यै नसुध्रने भूल…… सेनको नाजुक अवस्था देखेर रुन थाल्छिन् ।
बन्दी-१ – दर्दले छटपटाउँदै हुँ…मरे…मरेनि आमा । अब मैले तिम्रो सेवा गर्ने मौका नपाउँने भएँ । केही क्षणमा नै बर्दिधारी-१ को प्रवेश भीआईपी कोठामा हुन्छ । त्यहाँ बर्दिधारी-१ को मुक्कासँगै बुट र लाठी बजि्ररहँदा बन्दीको प्राणपखेरु उड्छ । बन्दीको मृतक शरीरलाई बोरामा पोको पारेर एक कुनामा थुपारिन्छ । सरकारी नम्बर प्लेट परिवर्तन गरी रातो बनाइएको बा१च६०७ नम्बरको सेतो रङ्गको हाइलक्सपिकअफ भ्यानमा हालेर क्लव बाहिर निकालिन्ो तरखर हुन्छ । अन्य तल्ला दर्जाका बर्दिधारीहरू सम्मिलित टोलीले राती लासलाई आर्यघाट लग्ने कार्यक्रम बन्छ । घटनालाई गोप्य राख्न उच्च सतर्कता अपनाइन्छ । कुनै कैदीलाई त्यहाँ राखिन्न । नयाँ बर्दिधारीहरूलाई समेत अन्यत्रै खटाइन्छ ।
रातको समय छ । आर्यघाटको स्थानमा बर्दिधारीहरू उभिएका छन् । शहरका मान्छेहरूको चालचुल छैन । निम्न तहका बर्दिधारीहरूको मुहारमा निराशाका वादलहरू मडारिएको प्रष्ट आभाष हुन्छ । उच्च तहका बर्दिधारीहरू भने मनमा त्रास लिएर पनि ओठमा हाँसो ल्याउँने असफल प्रयास गरिरहेका हुन्छन् । सर्वत्र अनिष्टै अनिष्ट निम्तेला जस्तो वातावरण हुन्छ ।
नेपथ्यबाट आवाज आउँछ – दण्डको पनि सीमा हुन्छ । युद्धको पनि नीति हुन्छ । यी विचारा सेनको के गल्ती कलमका भरमा बाँच्नेहरूको यो दुर्दशा । यो त सरासर अत्याचारको पराकाष्टा हो । यो कालको इतिहासले हामी बर्दिधारीहरूलाई सक्तो सराप्दछ । केही मलिन स्वरमा हामी सबैले विराएका छैनौँ सेन । हामीलाई माफ गर । ठूला ओहोदाका केही मच्छडहरूबाट तिम्रो यो हविगत हुन गयो । यो कालो इतिहासलाई जस्ताको तस्तै लेख्न हामी सहयोग गर्नेछौँ । तिम्रो यो कायरतापूर्ण हत्यामा हाम्रो भौतिक उपस्थिति नभए पनि दोषी छौँ । किनकि हामी रमिते भयौँ । रमिते तमासे भएर हामीले ठूलो भुल गर्यौँ । हामीलाई माफ गर ।
बर्दिधारी-१ – आवाज जसको होस् । कर्तव्य पूरा गर्दा गर्दै सेन खलास भइगयो । मेरो पनि चाहना हैन यसलाई मारिहाल्ने । यो भवितव्यमा पर्यो । यसलाई हामीले यही रुपमा लिनुपर्छ ।
नेपथ्यबाट चर्को आवाज आउँछ – ए अफिसरहरू तिमीहरूको यो खेलले धेरै सपुतहरू मरे । जो मरे पनि गरिब बाउआमाका सन्तान मरे । तिमीहरू जस्ता जल्लादहरूको यो खेलले हामी बदनाम भयौ । यस्तै अत्याचारले पि_िल्सएकाहरू यहाँ अनगिन्ती छन् । यत्तिखेर हामी इतिहासको संगीन घडीमा यात्रा गरिरहेका छौँ भन्ने नविस्र । विगतको जस्तो कालो इतिहास सधैँ रचिन्न । यी कृष्ण सेन इच्छुकको बारेमा जे जति भनिएपनि त्यसले यिनको समग्र मूल्यांकन हुन सक्तैन । यिनको दिव्य महान्ताको वयान गर्न शब्दको अर्थ लगाउने सामथ्र्य गुमेको क्षणमा छौँ हामी कायरतापूर्ण दमन गर्ने यो यात्रा गद्दारहरूको यात्रा हो । जे नहुनु थियो भइगयो । अब यिनले हिँडेको बाटोका सक्कली पथगामी बनौँ । यिनले देखाएको बाटोमा लागौं । हैन लाग्न सक्तैनौं भने पनि लागेकाहरूलाई समर्थन गरौँ । जबसम्म हामी यी सेनलॆ उमारेका बेर्नाका सुसारे हुँदैैनौँ तबसम्म यिनले आफ्नो जीवनमा जोडेजस्तै शब्द र कर्मको सन्तुलन आ-आफ्नो जीवनमा जोड्न सक्तैनौँ । होसियार ! होसियार !! होसियार !!! होसमा आऊ होसमा ल्याऊ ।
बर्दिधारी-२ – घोर आश्चर्य । नगर्नुपर्ने काम भयो ।
बर्दिधारी-१ – यो नाटक देखाउँने को हो चिनेर पाता कस त
बर्दिधारी-२ – तर सत्य-असत्य छुट्याउँने बेला होइन यो ।
बर्दिधारी-१ – शब जल्दाजल्दै उपस्थित सहपाठीहरूसँग ख्यालख्यालमै स्विट एण्ड सावर गुलियो र अमिलो गर्दागर्दै कृष्ण सेन त माथि पुग्यो । जसलाई जे लेखेको हुन्छ त्यही भोग्नुपर्छ । अब मेरो पनि प्रमोशन तिमीहरूको पनि प्रमोशन भएन त मज्जा आहासको हाँसो छाउँछ ।
नेपथ्यबाट पुनः भिन्न किसिमको कडा आवाज आउँछ – जीवनभर जनताका हितमा शब्द समर्पण गर्दै आएका आस्था र विश्वासका एक सतिसाल प्रगतिवादी कवि एवं वरिष्ठ पत्रकार यी कृष्ण सेन’इच्छुक’ को भौतिक जीवन लीला यही समाप्त भइरहेको छ । यिनका शब्दहरूको पहाड सगरमाथाझैं उच्च छ । त्यस पहाडले तिमीहरू जस्ता बर्दिधारी-१ बर्दिधारी-२ बर्दिधारी-३ हरू र जनताको भक्षक गर्ने अन्य सारा बर्दिधारीहरूलाई बाँकी छाड्ने छैन । यी इच्छुकको महान्ता र वलिदानीले जनता पिरोल्ने पिराहाहरूलाई थिचिइरहनेछ थिचिरहनेछ । बदलामा जनताहरू भने उ_िक्सरहनेछन् उ_िक्सरहनेछन् । इच्छुक हरेक कलमजीविहरूलाई कलमबाटै राष्ट्र सेवा गर्न प्रेरित गरिरहनेछन् गरिरहनेछन् । धन्य धन्य जनताका प्यारा मान्छे सेन ! तिम्रो कलमलाई यो सच्चा नेपालीको सलाम !! तिमीलाई पौने तीन करोड नेपालीको श्रद्धासुमन !!!
लास जलिरहन्छ जलिरहन्छ । प्रतिबन्धू शीर्षकको कृष्ण सेन’इच्छुक’ को चर्चित गीत कविता बजिरहन्छ बजिरहन्छ । नेपथ्यबाट पनि सोही गीत गुनगुनाएको आवाज प्रष्ट सुनिन्छ-
हाम्रा खुट्टाहरूमा नेल गिराउँदै
तिमी भन्छौ-हिँड्न त हिँड
तर यो बाटो नहिंड
जित हाम्रै हो
नोटः- यो नाटकको पहिलो दृश्यको घटना कृष्ण सेन’इच्छुक’ को जीवनमा जेठ ७ गते २०५९ मा महेन्द्र पुलिस क्लवमा घटेको घटनामा आधारित छ । दोश्रो दृश्यको घटना भने उनको जीवनमा विहानको ११ बजे जेठ १३ गते २०५९ मा सोही क्लवमा घटेको घटनामा आधारित छ । तेश्रो दृश्य भने आर्यघाटमा घटेको घटनामा आधारित छ । यो नाटकका अधिकांश कुराहरू जनदिशा दैनिकका तत्कालिन पत्रकार भरत सिग्देल र अर्की जनादेशकी तत्कालिन पत्रकार संगीताका अनुसार छन् । युग उचाल्ने अक्षरकर्मीको दुःखद अवसान शीर्षकको यो नाटक अशोक सुवेदीद्वारा सम्पादित तथा प्रकाशित आस्था र निष्ठाका सतिसाल कृष्ण सेन’इच्छुक’ शीर्षकको पुस्तकमा समाविष्ट पर्शुराम काफ्लेको लेख लगायतका सोही पुस्तकका अन्य लेखहरू तत्कालिन पत्रकार महासंघ सप्तरीका अध्यक्ष वैद्यनाथ झासँगको बातचित इच्छुक स्मृति ग्रन्थका लेखहरू र आफ्नै अनुभवमा आधारित छ । पर्शुराम काफ्लेको लेखको शीर्षक छ- यसरी भएको थियो कृष्ण सेनको हत्या । उक्त लेखमा उल्लेख भएअनुसार नाटकमा पात्र सिर्जना गरिएको हो । जस अनुसार बर्दिधारी-१ प्रहरी उपत्यका हेर्ने तत्कालिन डीआईजी अमरिसंह शाह हुन् भने
बर्दिधारी-२ प्रहरी उपत्यका हेर्ने तत्कालिन डीएसपी विक्रम थापा हुन् । अर्का बर्दिधारी-३ भने सामान्य दर्जाका प्रहरी हुन् । यी बर्दिधारी-३ र बन्दी-२ मात्र काल्पनिक पात्र हुन् । बन्दी-२ नामाकरण गरिएकी पात्र काल्पनिक भए पनि उनले नेपालका धेरै विद्वान्हरूको प्रतिनिधित्व गरेकी छिन् । उनी पागलजस्ती देखिए पनि सच्चा नागरिकको भूमिकामा छिन् । त्यस्तै बन्दी-१ नामाकरण गरिएका पात्र भने कृष्ण सेन’इच्छुक’ स्वयम् हुन् । २०१३ सालमा भारतको देहरादुनमा जन्मेका सेन जनादेश साप्ताहिक कलम त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका र जनदिशा दैनिक पत्रिकाको सम्पादन गर्थे । उनका शोकााजली इतिहासको यस घडीमा बन्दी र चन्द्रागिरी कविता संग्रह प्रकाशित छन् । उनी सफल कवि समीक्षक भूमिका लेखक, गद्यकर्मी, संस्मरण लेखक पत्रसाहित्य लेखक थिए । उनकी श्रीमती तक्मा केसी र छोरी समीक्षा छन् । तक्मा श्रीमान्को हत्यारालाई पत्ता लगाई उचित दण्ड देऊ भनेर पुकारा गरिरहेकी छिन् । सेनको योगदानको कदर गर्दै कृष्णसेन अनलाइन खोलिएको छ । मरणोपरान्त उनलाई सहासिक पत्रकारिता पुरस्कारले समेत सम्मानित गरिएको छ । उनको योगदानका वारेमा यस पिढी र आउँदा पिढीलाई
यथेष्ठ जानकारी दिन विभिन्न संघसंस्थाले स्मृति ग्रन्थ निकाल्दै आएका छन् ।
मझेरीमा पहिलो पटक प्रकाशित 2009-07-31 22:22:13 +0900